ကွန်ပျူတာနှင့် Mobile Phone မှာ VPN ကို ဘယ်လို install လုပ်ရမလဲ ? - MiteLar
ကွန်ပျူတာနှင့် Mobile Phone မှာ VPN ကို ဘယ်လို install လုပ်ရမလဲ ?
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် VPN တစ်ခုကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
VPN တစ်ခုမတပ်မီ၊ မတူညီသော အကောင်အထည်ဖော်မှုနည်းလမ်းများနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန် အရေးကြီးသည်။
သီးခြား VPN ဖောက်သည်များအတွက် software ကိုတပ်ဆင်ရမည်။ ဒီဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအဆုံးမှတ်၏ လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန် ပြုပြင်ထားသည်။ VPN ကိုတည်ဆောက်သောအခါ အဆုံးမှတ်သည် VPN link ကိုအမိန့်ပေးပြီး အခြား endpoint သို့ ဆက်သွယ်သည်၊ encryption tunnel ကိုဖန်တီးသည်။ ကုမ္ပဏီများတွင်၊ ဤအဆင့်သည်များသောအားဖြင့် ကုမ္ပဏီမှထုတ်ပေးသောစကားဝှက်တစ်ခု (သို့မဟုတ်) သင့်လျော်သောလက်မှတ်တစ်ခု တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်သည်။ စကားဝှက်တစ်ခု (သို့မဟုတ်) လက်မှတ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် firewall သည် ၎င်းသည် တရားဝင်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်။ ထို့နောက် ၀ န်ထမ်းသည်သူ / သူမကိုသိထားသည့် A ချက် A လက်များဖြင့်သူ / သူမကိုခွဲခြားသတ်မှတ်လိမ့်မည်။
Browser extension များ
VPN extensions များကို Google Chrome နှင့် Firefox ကဲ့သို့သော ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာအများစုတွင် ထည့်နိုင်သည်။ Opera အပါအ ၀ င်အချို့ browser များတွင် ၄ င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် VPN extension များရှိသည်။ Extensions များသည် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် အင်တာနက်ကို အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း သူတို့၏ VPN ကိုမြန်မြန်ပြောင်း။ ပြုပြင်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ သို့သော် VPN ဆက်သွယ်မှုသည် ဤဘရောင်ဇာတွင် မျှဝေထားသောသတင်းအချက်အလက်များအတွက်သာ မှန်ကန်သည်။ အခြားဘရောင်ဇာများနှင့် အခြားအင်တာနက် အသုံးပြုမှုကိုဘရောင်ဇာအပြင်ဘက် (ဥပမာအွန်လိုင်းဂိမ်းများ) ကို VPN မှစာဝှက်။ မရပါ။
browser extensions များသည် VPN clients များနှင့်မပြည့်စုံသော်လည်း၎င်းတို့သည်အင်တာနက်လုံခြုံရေးအပိုအလွှာကိုလိုချင်သည့်ရံဖန်ရံခါအင်တာနက်အသုံးပြုသူများအတွက်သင့်တော်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ချိုးဖောက်မှုများကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ အချက်အလက်ကောက်ယူသူများသည် VPN extensions အတုများကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားနေကြသဖြင့်အသုံးပြုသူများအားဂုဏ်သိက္ခာရှိသော extension ကိုရွေးချယ်ရန်လည်းအကြံပေးသည်။ အချက်အလက်ကောက်ယူခြင်းဆိုသည်မှာသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖန်တီးရန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာများပြုလုပ်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကြော်ငြာအကြောင်းအရာသည်သင်ကိုယ်တိုင်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည်။
အကယ်၍ ထုတ်ကုန်မျိုးစုံသည်တူညီသောအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားပါက၎င်းသည်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သီးခြား VPN တပ်ဆင်ခြင်းထက် router ပေါ်တွင် VPN ကိုတိုက်ရိုက်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။ စမတ်တီဗီများကဲ့သို့သော configure လုပ်ရန်မလွယ်ကူသောအင်တာနက် connection တစ်ခုရှိ device များကိုသင်ကာကွယ်လိုပါက router VPN သည်အထူးအသုံးဝင်သည်။ သင်၏အိမ်ဖျော်ဖြေရေးစနစ်များမှတစ်ဆင့်ပထဝီအနေအထားအရကန့်သတ်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။
router VPN သည်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးအမြဲတမ်းလုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံမှုကိုပေးသည်။ မလုံခြုံသောစက်ပစ္စည်းများ ၀ င်သောအခါသင်၏ကွန်ယက်ကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ သို့သော်သင်၏ router တွင်ကိုယ်ပိုင် user interface မရှိလျှင်စီမံခန့်ခွဲရန်ပိုမိုခက်ခဲနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ၀ င်နေသောဆက်သွယ်မှုများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းခံရနိုင်သည်။
ကုမ္ပဏီ VPN သည်စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်နှင့်နည်းပညာအထောက်အပံ့လိုအပ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် VPN ကိုကုမ္ပဏီ၏ IT အဖွဲ့မှသင့်အတွက်ဖန်တီးသည်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေနှင့်သင်သည် VPN ကိုယ်နှိုက်မှအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုမရှိပါ။ သင်၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အချက်အလက်လွှဲပြောင်းခြင်းကိုသင့်ကုမ္ပဏီမှမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အချက်အလက်ယိုစိမ့်မှုဖြစ်နိုင်ချေကိုလျော့ချရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကော်ပိုရိတ် VPN ၏အဓိကအားသာချက်မှာကုမ္ပဏီ၏အင်တာနက်နှင့်ဆာဗာကိုအပြည့်အဝလုံခြုံသောဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်၊ ကုမ္ပဏီပြင်ပတွင်အလုပ်လုပ်သော ၀ န်ထမ်းများပင် ၄ င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုအသုံးပြုသည်။
စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်အခြားကိရိယာများပေါ်တွင် VPN တစ်ခုကိုသုံးနိုင်သလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ စမတ်ဖုန်းနှင့်အခြားအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားသောကိရိယာများအတွက် VPN ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ငွေပေးချေမှုသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအင်တာနက်သိုလှောင်ရန်သိမ်းဆည်းရန်သုံးလျှင်၎င်းမိုဘိုင်းစက်အတွက် VPN သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ များစွာသော VPN ပံ့ပိုးသူများသည်မိုဘိုင်းဖြေရှင်းနည်းများကိုကမ်းလှမ်းကြသည်။ ၎င်းတို့ကိုအများစုသည် Google Play သို့မဟုတ် Kaspersky VPN Secure Connection ကဲ့သို့သော Apple App Store မှတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
သတိပြုရန်မှာ VPN များသည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သူတို့သည်သင်၏ IP ကိုကာကွယ်ပြီးသင်၏အင်တာနက်ရာဇ ၀ င်ကို encrypt လုပ်နေစဉ် VPN ဆက်သွယ်မှုသည်သင့်ကွန်ပျူတာကိုပြင်ပကျူးကျော်မှုမှကာကွယ်ပေးသည်မဟုတ်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ Kaspersky Internet Security လိုဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဗ်ဝဲကိုသေချာသုံးသင့်တယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် VPN ကိုသူ့ဟာသူအသုံးပြုခြင်းသည်သင့်အား Trojans များ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ bot များနှင့်အခြား malware များမှအကာအကွယ်မပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် VPN ကိုသူ့ဟာသူအသုံးပြုခြင်းသည်သင့်အား Trojans များ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ bot များနှင့်အခြား malware များမှအကာအကွယ်မပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
malware သည်သင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်သို့ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင် VPN သုံးနေသည်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေသင့်ဒေတာများကိုခိုးယူနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အမြင့်ဆုံးလုံခြုံရေးကိုသေချာစေရန်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးပရိုဂရမ်တစ်ခုနှင့်အတူ VPN တစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်အရေးကြီးသည်။
လုံခြုံသော VPN ပံ့ပိုးသူကိုရွေးချယ်ခြင်း
သင်ယုံကြည်ရသော VPN ပံ့ပိုးသူကိုလည်းရွေးချယ်ရန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏ ISP သည်သင်၏အင်တာနက်အသွားအလာကိုမမြင်နိုင်သော်လည်းသင်၏ VPN ပံ့ပိုးသူကမြင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ VPN ပံ့ပိုးသူအားအနှောင့်အယှက်ပေးလျှင်သင်လည်းအလားတူဖြစ်သည် ဤအကြောင်းကြောင့်၊ သင်၏အင်တာနက်လုပ်ဆောင်မှုများကိုဖုံးကွယ်ထားရန်နှင့်အမြင့်ဆုံးလုံခြုံရေးအဆင့်ကိုသေချာစေရန်အတွက်ယုံကြည်ရသော VPN ပံ့ပိုးသူကိုရွေးချယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
သင်၏စမတ်ဖုန်းတွင် VPN ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Android စမတ်ဖုန်းနှင့်အိုင်ဖုန်းများအတွက် VPN ဆက်သွယ်မှုများလည်းရှိသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, စမတ်ဖုန်း VPN ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးအောက်ပါတို့ပါဝင်သည်
များသောအားဖြင့် installation လုပ်ငန်းစဉ်သည် iOS App Store သို့မဟုတ် Google Play စတိုးမှအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုသာဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်။ အခမဲ့ VPN ပံ့ပိုးသူများတည်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်ဝိုင်ဖြစ်သည်။